Cricbuzz - In Indian Languages 3.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.1 လြန္ခဲ့ေသာ4ပတ္က
Application မ်ား အားကစားမ်ား Cricbuzz - In Indian Languages
Cricbuzz - In Indian Languages ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Google Play တွင် Cricbuzz, နံပါတ် 1 ခရစ်ကက် App ကိုယခုဟိန္ဒူ, တမီး, ကန်နာဒါ, ဂု, မာရသီနှင့်ဘင်္ဂါလီများတွင်ခရစ်ကက်တတ်၏။ ဒီ app အားလုံးကိုနိုင်ငံတကာပုရစ်ပွဲ (စမ်းသပ်ခြင်း, ODI နှင့် T20), အိန္ဒိယပရီးမီးယားလိဂ် (IPL), ICC ကခရစ်ကက်ကမ္ဘာ့ဖလား, ချန်ပီယံလိဂ် T20, Big Bash မှာနှင့်ကမ္ဘာအနှံ့ကနေအခြားအဓိကပြည်တွင်းပြိုင်ပွဲ၏ဘောလုံး-by-ဘောလုံးကိုလွှမ်းခြုံပေးသည် ဒေသဆိုင်ရာဘာသာစကားများ။
- သင်ကအရေးယူဆောင်ရွက်မှုမှအနီးကပ်နေထိုင်ရန်အထောက်အကူပြုဘောလုံးကို updates များကိုအားဖြင့်ပုရစ်ရမှတ်များနှင့်ဘောလုံးနေထိုင်ပါ။
သငျသညျဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောပွဲအကြောင်းကိုလိုအပ်သမျှအချက်အလက်တွေကို - - XI, ဒို, ပွဲတွေထဲမှာ Playing ကစားသမား။
- ပွဲဖြစ်အံ့ဆဲဆဲ - မနက်ဖြန်လာမည့်သီတင်းပတ်လာမည့်လတွင်အဘို့အဘယ်သို့တက်လား
- မကြာသေးခင်ကပွဲစဉ်၏ရလဒ်များ - အမှု၌သင်တို့ကိုမကြာသေးမီကလွဲချော်မယ့်ဂိမ်း၏ scorecard ကိုကြည့်ချင်တယ်။
- Player ကိုပရိုဖိုင်း - ပြေး, ကက်နှင့်အခြားအရာအားလုံး - ခရစ်ကက်အားလုံးကစားသမားအကြောင်းပါ။
- တချို့ကဟန်းဆက်အချို့ဒေသဆိုင်ရာဘာသာစကားများကိုထောကျပံ့မပေးပါဘူး။ သင်စာရင်းထဲတွင်အထက်ပါဖော်ပြခဲ့တဲ့ဘာသာစကားများမဆိုရှာတွေ့နိုင်မဟုတျပါလျှင်ဒီတော့က device ကိုတိကျတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။
- ထိုအပြီးအစီးခရစ်ကက်သည်အင်္ဂလိပ် App ကို (ဘောလုံးဝေဖန်, သတင်း, ဓာတ်ပုံများ, အဆင့်, မော်ကွန်းတိုက်အားဖြင့်အများကြီးပိုပြီးဘောလုံးကိုပါဝင်သော) ဒီမှာ Cricbuzz App ကို၏ဤဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်: https://play.google.com/store/apps/ အသေးစိတျ? id = com.cricbuzz.android
Cricbuzz - In Indian Languages အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Cricbuzz - In Indian Languages အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Cricbuzz - In Indian Languages အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Cricbuzz - In Indian Languages အား အခ်က္ျပပါ
oyebahi စတိုး 84 163.77k
Cricbuzz - In Indian Languages ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Cricbuzz - In Indian Languages အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 3.1
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.cricbuzz.com/info/privacy
App Name: Cricbuzz - In Indian Languages
Release date: 2019-08-20 17:53:34
လက်မှတ် SHA1: C8:53:CB:D6:66:FF:49:00:2C:49:DA:47:FA:BD:C0:89:2B:A6:4C:27
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Pankaj Chhaparwal
အဖွဲ့အစည်း (O): Akuate Internet Service Pvt. Ltd.
Cricbuzz - In Indian Languages APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ